LUSAKA, ZAMBIA - Zimbabwean police took former finance minister and opposition leader Tendai Biti into custody Thursday after Zambian authorities rejected his bid for asylum and deported him, his lawyer said.
Six people were killed last week in an army crackdown on postelection protests against the victory by Mnangagwa's ruling ZANU-PF party. Mnangagwa's main rival, opposition leader Nelson Chamisa, has accused the government of clamping down on members of his party.
Biti, whose People's Democratic Party had formed an election alliance with Chamisa's Movement for Democratic Change (MDC), had been in hiding since last week and had feared for his life, his Zimbabwean lawyer Nqobizitha Mlilo said.
Earlier this month Zimbabwe's police raided offices of the opposition Movement for Democratic Change Alliance on the grounds that there were unlicensed fire arms and grenades in the possession of Tendai Biti and other senior officials in Harare, Aug. 8, 2018.
Phiri said the Zambian High Court had Wednesday night issued an order to stop Biti's deportation but Zambian immigration and police refused to accept the court papers.
"We tried to serve the court order on the immigration officers who were keeping him at a school under police protection but they refused to take it," Phiri said.